Tusaha Baasaboorada Ugu Awooda Badan 2022 ayaa daaha ka qaadaya 'apartheid socdaal'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Tusaha Baasaboorada Ugu Awooda Badan 2022 ayaa daaha ka qaadaya 'apartheid socdaal'
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Singapore • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
2022 Baasaboorka ugu awooda badan aduunka index ayaa kashifay "apartheid socdaal"
Sida warbixinta lagu sheegay, guulaha socdaalka ee ay arkeen muwaadiniinta wadamada dakhligoodu sarreeyo iyo kuwa dhaqaalahoodu sarreeyo ayaa "ku yimid kharashka" wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa loo arko inay "khatarta sare" leeyihiin marka la eego amniga iyo arrimo kale.
Shirkadda Henley & Partners ee UK ayaa maanta soo saartay qiimeyntii ugu dambeysay ee baasaboorka caalamiga ah - daraasad ku saabsan dhaqdhaqaaqa caalamiga ah oo lagu ogaaday in muwaadiniinta Japan iyo Singapore waxay haysataa baasaboorka ugu safarka badan adduunka sanadka 2022.
Iyadoo aan la xisaabineynin xannibaadaha COVID-19, qiimeynta horraanta 2022 waxay ka dhigan tahay taas Japan iyo dadka reer Singapore sida muuqata waxay geli karaan 192 waddan bilaa fiisaha.
Waddan kale oo Aasiya ah, South Korea, waxa uu ku xidhan yahay Germany oo kaalinta labaad kaga jira liiska 199 wadan. Inta soo hartay 10-ka waddan ee ugu sarreeya waxaa u badan dalalka Midowga Yurub, UK iyo US ayaa galay kaalinta lixaad, halka Australia, Canada, iyo dalalka Bariga Yurub ay soo saareen kuwa ugu bandhigga sarreeya.
Dhanka kale muwaadiniinta Afgaanistaan ​​​​waxay si bilaash ah ugu safri karaan 26 goobood oo kaliya.
Qiimayntan ayaa ka digtay xannibaadaha COVID-19 ee ka sii daraya 'midab takoorka safarka' ee u dhexeeya waddamada hodanka ah iyo kuwa saboolka ah, iyo farqiga sii kordhaya ee xorriyadaha safarka ee ay ku raaxaystaan ​​​​dalalka qaniga ah iyo kuwa la siiyo kuwa saboolka ah.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in "sinnaan la'aantan" dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ay uga sii dartay caqabadaha safarka ee muddada uu socdo cudurka faafa, iyadoo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo dhawaan la barbar dhigay xannibaadaha lagu soo rogay dalalka Afrika iyo "safarka midab-takoorka."
"Shuruudaha qaaliga ah ee la xiriira socdaalka caalamiga ah waxay machadeeyaan sinnaan la'aanta iyo takoorka," ayuu yiri Mehari Taddele Maru, oo ah borofisar waqti-dhiman ah oo ka tirsan Xarunta Siyaasadda Socdaalka ee Machadka Jaamacadda Yurub, isaga oo intaa ku daray in waddammada horumaray aysan "mar walba la wadaagin" rabitaanka adduunka soo koraya. si looga jawaabo "xaalad isbedeleysa."
"COVID-19 iyo is dhexgalka ay la leedahay xasillooni darrada iyo sinnaan la'aanta ayaa iftiimisay oo sii xoojisay farqiga naxdinta leh ee dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee u dhexeeya waddamada hodanka ah ee horumaray iyo dhiggooda saboolka ah," ayuu raaciyay Mehari.
Dhanka kale, warbixintu waxay saadaalisay hubanti la'aan dheeri ah oo ku saabsan safarka iyo dhaqdhaqaaqa inta ka harsan sanadka, iyadoo la tixgalinayo kororka kala duwanaanshaha Omicron ee coronavirus. Soo ifbaxa "nooca cusub ee xooggan" wuxuu ahaa "guuldarrooyinka juqraafi ahaaneed" ee dhanka Mareykanka, UK, iyo Midowga Yurub oo aan siinin maalgelin wanaagsan iyo sahayda tallaalka koonfurta Afrika, sida uu qabo faallooyin by borofisar ka tirsan jaamacadda Columbia Misha Glenny oo la socda warbixinta.